शैक्षिक परामर्शदातृ भन्छन्-विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउँछौं | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
शैक्षिक परामर्शदातृ भन्छन्-विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउँछौं
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा काठमाडौंमा बिहीबारदेखि ‘ ११ औं इक्यान शैक्षिक मेला’ सुरु भएको छ । मेलामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र अभिभावकले सहभागिता जनाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विदेश जानका लागि झण्डै ५० हजारले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका थिए । वर्षैपिच्छे यो संख्या बढ्दो दरमा हुनुले विदेशमा अध्ययन गर्न जान नेपाली विद्यार्थी निकै उत्साहित छन् भन्ने देखाएको छ । समग्रमा विदेशमा वैदेशिक अध्ययन र इक्यानले गरेको मेलाका सन्दर्भमा इक्यानका उपाध्यक्ष बिष्णुहरि पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सार-संक्षेपः
पछिल्लो समयमा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको बढ्यै छ । किन नेपाली विद्यार्थी विदेश जान यति धेरै उत्साहित देखिए ?
विदेश गएर पढ्नेको ट्रेण्ड बढ्नुमा त्यहा गएर आएका विद्यार्थीले यहाँ आएर गरेको परफरमेन्स नै हो । उनीहरुले यहाँ गएर आर्जन गरेको सीप, ज्ञानका आधारमा उनीहरुले यहाँ आएर गरेको क्रियाकलापले पनि यो ट्रेण्ड बढ्दो छ । दोस्रो चाँही उनीहरुले गरेको कमिनिकेशनले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । विश्व नै अहिले ग्लोब भिलेजका रुपमा अघि बढिरहेको छ । यसले कतै बाउण्ड्री छैन । विश्व यति सानो भइसक्यो । त्यसैले विदेश गएर पढ्नेहरुमार्फत पाउने इन्फरमेशनका कारण त्यता जान चाहानेहरु बढ्ने क्रममा छन् ।
त्यसैगरी देशभित्र पनि राम्रा पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाहरु जुन रफ्तारमा आउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । हिजो बहुदल आएपछि देशमा शैक्षिक क्रान्ति हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, फेरि देश जनयुद्धमा गएपछि १० वर्ष द्वन्द्वले लपेट्यो । त्यतिबेला पनि विद्यार्थीले यहाँ राम्रो शैक्षिक वातावरण पाएनन्, अभिभावकहरुलाई पनि त्यसले चिन्ता मात्रै थप्प्यो ।
०६२/६३को जनआन्दोलन र नयाँ संविधानपछि अवस्था सुधि्रएला भन्ने सबैलाई लागेकै थियो । तर, त्यसपछि पनि देशको शैक्षिक अवस्थाले निरास नै बन्नुपर्ने अवस्था कायम रहिरह्यो । नयाँ संविधान आएपछि देश शैक्षिक अवस्था सुधार्दै आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा भएपनि थप आशा गर्ने ठाउँ कम देखेपछि वैदेशिक शिक्षा आर्जनका लागि विदेशिने बढेका हुन् ।
एउटा पंक्तिले तपाईंहरुलाई युवा पलायन गर्न हौसाएको आरोप लागाउँछ । विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी पनि उतै हराउने क्रम बढिरहेको छ । किन यस्तो भयो ?
हो, त्यो सत्य हो कि जुन रफ्तारमा नेपालीविद्यार्थी विदेशिादैछन्, त्यसरी फिर्ता भएका छैनन् ।आज शेष घलेहरु किन अष्ट्रेलियाबाट आएर यहाँ अर्बौं लगानी गरिरहेका छन् ? त्यसका लागि समय लाग्छ । मान्छेहरु जसरी लगानी गरेर गएका छन् ।
त्यसलाई कसरी रिर्टन गर्ने भनेर लान्छन् । रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट भन्छ यो भएपछि विद्यार्थी फर्किन्छ । पढ्न गएका विद्यार्थी फर्किने ट्रेण्ड हिजोभन्दा आज बढेको छ । आज भन्दा भोलि बढ्ने नै छ । यो पहलिोकुरा भयो, दास्रो कुरा-आज जतिपनि प्राइभेट सेक्टरलगरेका इनोभेसनमा एन्टरप्राइजिङ स्किल ल्याएर टेक्नोलोजिी ट्रान्सफर गर्ने कुराहरुमा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको जमात नै बढी छ ।
प्राइभेट बैंकहरुमा यो स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यो डाटाले स्पष्ट देखाउँछ । हो, कहाँ कति त्यस्ता विद्यार्थी छन्, हामी भन्न नसकौंला । तर, कर्पोरेट होस्, प्राइभेट होस्, एन्टरप्रेनियरसीपका सेक्टरमा होस् या इनोभेसेन, सर्भिस, एनजीओ तथा आईएनजजीओमा उनीहरुको सहभागिता बढ्दो छ ।
म्यानेजिङ लेभलमै बसेर काम गर्ने त्यस्ता जमातले अरु कतिलाई आफ्नो स्कील ट्रान्सरफर गरे होलान् त ? त्यसैले अपेक्षा जति विदेशिएका जमात यहाँ फर्केनन् होला, तर, आशावादी हुने ठाउँ देखिएको छ । अझ यहाँ अवसर दिन सक्यो र लगानी मैत्री वातावरण दिन सक्यो भने विदेश पढ्न गएकाहरु आफ्नो देश आउँछन् । यस्तो वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व राज्यको हो ।
विदेशबाट फर्किएकाहरुले गरेका लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने र अनेकन् अप्ठेरा र झन्झटहरुलाई फुकाइ दिने हो भने यहाँ अवर सिर्जना हुन्छ । त्यही अवसरलाई छोप्न उनीहरु फर्किन्छन् । त्यसका लागि कम्पनी रजिष्ट्ररदेखि करका नियमहरुलाई लगानीमैत्री गरिदिनुपर्‍यो । विदेशबाट आउने लगानीलाई सहज गरिदिनुर्‍यो ।
यति मात्रै पाटा छैनन्, अन्य धेरै पाटाबाट राज्यले नीति बनाएर उनीहरुलाई यहाँ फर्किन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । इक्यानले त्यसका लागि पहलकदमी लिन्छ ।
विद्यार्थीलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा मिल्छ भन्ने प्रत्याभूति नहुनुमा तपाईंहरु जस्तो शिक्षा क्षेत्रमै लाग्नु भएकाहरुको दोष छैन ?
मलाई ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुहन्छ भने म नेपालमा ४/५ हजार कलेज र विद्यालय चलाउँछु । मरो नेटवर्कभित्र ५ हजार विद्यार्थी छन् । मेरमा कलेजमा मैले चाहेको जति विद्यार्थी लिन सक्छु त ? म कहाँ बीबीए पढाइ हुन्छ, ६४ सीट मात्रै छ । आइटी पढाइ हुन्छ ४८ सीट छ । इञ्जिनियरिङ पढाइहुन्छ मानौं ९६ सिटमात्रै छ । बाँकी विद्यार्थी कहाँ छन्, कहाँ गए त ?
अभिभावकले फण्डिङ गर्न सक्छ भने यहाँ अवसर नपाउादा विद्यार्थी बाहिर जान्छ नै । फेरि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दियौं त, प्राक्टिकल एजुकेशन कति दियौं ?
अहिले हामी कहाँ फटाफट नाम लिएर भन्यौं भने राम्रो पढाइ हुने कलेज औंलामा गन्न सकिन्छ । प्ल-टू ब्याचलर पढ्ने कुन कलेज, मास्टर पढ्ने कुन कलेज भनेर गुणस्तर छुट्याएर भन्न सकिने अवस्था छ ।
युनिभर्सिटी कलेज र सिलेबल्स डिजाइन गर्नेहरुले राम्रो कोर्स डिजाइन र अपटूडेट गर्न नसक्दा क्वालिटीमा समस्या आइरहेको छ । यसले विद्यार्थीले आफूले चाहेको स्तरको डिग्री हाँसिल गर्न नसकेको र कोटको सीमितताले पनि विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्यता परिरहेको छ । मैले यहाँको शक्षिा प्रणाली सबै खराव भयो पनि भनिरहेको छैन ।
तर, केही कुरा सबैले विचार गर्नपर्ने छ कि किन यहाँको शैक्षिक प्रणालीले विद्यार्थीलाई यतै रहन प्रेरित गरेन भनेर सोच्नुपर्ने बेला भने भइसक्यो ।
यसरी विद्यार्थीको तीव्र पलायनले देशलाई कता लैँजादैछ ? तपाईंहरुले आफ्नो निष्पक्ष नजरले हेेरेर विश्लेषण गर्नुभएको छ कि छैन ?
पक्कैपनि सन् २००६ तिर हेनुभयो भने अहिलेको शक्तिशाली देश चाइनाले पनि मास्टर्स अफ इञ्जिनियरिङका लागि हरेका वर्ष ३ हजारसम्म विद्यार्थी फ्रान्स पठाएको थियो । आज पनि ब्रजिलले क्यानडा पठाउँछ । भुटानले पनि अन्य देशमा पठाउँछ । अब यो कुरालाइ कसैले रोकेर रोकिने अवस्था पनि रहेन ।
तर, अब यि कुरालाई ख्याल गरेर अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्छ । जसको कारण विद्यार्थीहरु बाहिर गइरहेका छन् भनेर त्यसलाई रिभर्स हुने गरी एउटा प्लान त गर्नैपर्छ ।
आज देशका सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भिर भएर सोचेर शिक्षाको बारेमा एउटा साझा अवधारणा बनाएर अघि जान जरुरी छ । राज्य संयन्त्रले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
नेपाल सँधैभरि विद्यार्थी ‘निर्यात’ मात्रै गरिरहने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुुन सक्ला ?
हो, नेपालमा पनि सम्भावना नभएका होइनन्, देशलाई एजुकेशन हबको रुपमा विकास गर्ने ठूला सम्भावना छ । हेर्नुस् त यो देश कति सुन्दर छ ? हरेक ५० माइलमा यस्तो बायो डाइभर्सिटी छ । यहाँ अध्ययन अध्यपनका लागि कल्चरका स्टुडेन्ट विदेशबाटै आउने सम्भावना छ ।
यहाँ हुनेे नेचुरेल डिजास्टरबारे अन्वेषण गर्ने र हिमश्रृङ्खलाबारे अध्धयन र अध्यापन गराउन सकिन्न र ? बुद्धीज्मबारे पनि यहाँ स्टडी गराउन सकिन्छ । यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यी विषयमा विदेशीहरुबाट अनुभव लिएर कोर्सहरु डेभलप गरेर विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउन अब काम हुनुपर्छ ।
आज हामी मेडिकलमा नम्बर वान हुन सक्छौं । इञ्जिनियरिङ, म्यनेजमेन्ट, टुरिज्म, लिबरल आर्टस् र बुद्धिज्म विषयमा पनि हामी यहाँ विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्छौं । यति विषयलाई राम्रोसाग अघि बढाएको खण्डमा हामी शैक्षिक हब बन्न सक्छौं ।
मेडिकलका लागि श्रीलंका र भारतका विद्यार्थी आउन सक्छन् । सरकारले सोचेर काम गर्ने हो भने जोर्डन, कुवेत र अफगानिस्तानबाट नेपालमा विद्यार्थी पढ्नका लागि आउन सक्छन् । ७ महिनाअघि अफगानिस्तानका शिक्षा मन्त्रीले कसरी नेपालमा अध्ययन गराउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरेर फर्किएका छन् ।
यहाँको शैक्षिक पद्धतिमा सुधार गर्दै त्यस्ता सम्भावना भएका विषयलाई राज्यले नै प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । सबै किसिमले वातावरण तयार हुनुपर्छ । हामी विदेशबाट विद्यार्थी नेपाल ल्याउ सक्छाैं ।
परामर्शमा आउँदा विद्यार्थीले विदेश गएपछि के-कस्ता कुरामा बढी प्रत्याभुति खोज्छन् ?
मेरो १४ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्दा विदेश जाने विद्यार्थी तीन वटा क्याटेगोरीको हुन्छ । एउटा विद्यार्थी साह्रै सिरियस छ । उसलाई एकेडेमिक डिग्री कुनैपनि कस्टमा लिनुपर्छ । अर्को विद्यार्थी म पढ्छु पनि र मेरो घरको फाइनान्सियल स्टाटसलाई पनि को-अप गर्नुपर्छ र ४ वर्षको डिग्री ६ वर्ष लगाएर भएपनि पढ्छु भन्छ । अर्को एउटा विद्यार्थी एक एनि कस्टमा म त्यहाँ इन्ट्री हुनुपर्छ र म त्यहाँ गएर पढ्नेभन्दा पनि आयाजर्नमा नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच्छ ।
हाम्रो रुची र हाम्रो फोकस भनेको पढ्न कै लागि जान्छु भन्नेलाई त्यहाँ पठाउने हुन्छ । त्यही भएर मैलो भनिरहेको हुन्छु कि हामीले एडि्मसन काउन्सिलिङ गर्ने होइन, करियर काउन्सिलिङ गर्ने हो । इक्यानको मेला पनि करियर काउन्सिल गर्ने ठाउँ नै हो ।
हामीले स्टुडेन्टको एकेडेमिक पर्सेन्टेज कति छ हेर्छौं, त्यपछि उसको फाइनान्सियल स्टाटस कस्तो हो हेर्छौं । त्यसैका आधारमा हामीले उनीहरुलाई युनिभर्सिटी छानिदिने हो । हामी उसलाई तिमि त्यो देशमा इन्ट्री हुने हो अनि कमाउने हो भनेर परामर्श गर्दैनौं ।
इक्यानका कोही सदस्यहरुले पनि त्यसरी काउन्सिलिङ गर्नु हुन्न । हामी स्टुडेन्टको पढाइर करियरमै बेस भएर परामर्श दिन्छौं ।
विदेशमा गएपछि के-के नै हुन्छ भनेर प्रलोभन त देखाउने काम त अझै बन्द भएको छैन नि, हैन ?
हो, त्यस्ता समसया हामीले नभेटाएका हैनौं । त्यस्तो समस्या हिजोको दिनमा थिए, अहिले पनि हुन सक्छ । देशमा १ हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरु छन् । तर, इक्यानसँग ३७० मात्रै संस्था आवद्ध भएका कारणले अरुले के गर्छन् भन्नेमा हामी जानकार जिम्मेवार हुँदैनौं ।
अरुले गल्ति गरिरहँदा हामी माथि पनि हामीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्छ । तर, हामी आवद्ध संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रलोभन दिएर मिसगाइड गरेको छ भने हामी कारवाही गर्छौं ।
यति धेरै संस्था इक्यान बाहिर छन् र राज्यले तिनलाई पनि राम्रोसँग रेगुलेट गर्दैन । यसले भोलि यो क्षेत्रमा विकराल अवस्था ल्याउँदैन ?
ठिक भन्नुभयो, हामी कन्सलटेन्सी ब्यवसायी संगठनको इक्यान नेता संगठन हो । यही इक्यानको पहलमा २०६८ सालबाट एउटा निर्देशिका जारी भयो । एउटा कुनै न कुनै हदबाट यसलाईमनिटरिङ गर्ने, गाइड गर्ने र एउटा फ्रेमवर्कभित्र राख्ने गरी राज्य अघि बढ्यो ।
यही इक्यानका कारण कन्सलटेन्सी ब्यवसायीलाई केही न केही भएपनि तालिम हुनुपर्‍यो भनेर एउटा टीआईटीआई मार्फत ट्रेनिङको ब्यवस्था पनि भयो । यस्तो खालको एक्टिभिटिज गरेर हामीले राज्यलाई जिम्मेवार बन्न भनिरहेका नै छौं । सँगै इक्यानभित्र नै एउटा ट्रेनिङ विभाग बनाएर ब्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न, नयाँ बिजनेश अपर्चुनिटी क्रियट गर्न, थ्रेट पन्छाउन हामीले तालिम दिइरहेका छौं ।
हामीले शिक्षा नियमावली आउँदा ११ वटा बुँदाहरु दर्शाएर परामर्श सेवालाई कसरी हेर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । हमीले विभिन्न माध्यमबाट शक्षिा नियमावलीमा रहनुपर्ने गरी दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गरेमा यो ब्यवसाय अझै सम्मानित र मर्यादित हुनेछ । त्यसो भएमा यो एउटा उद्योगका रुपमा विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
नेपाली विद्यार्थीहरुले कुन-कुन गन्तब्य बढी मन पराएका छन् ?
यो सब्जेक्छ स्पेसिफिक छ । बढी विद्यार्थीहरु पढ्न जाने गन्तब्य विषयअनुसार फरक छ । अष्ट्रेलिया र अमेरिकालाई धेरैले रुचाएका छन् । भारत पढ्न जानेको संया पनि उल्लेख्य नैछ । विशेषतः तराई क्षेत्रबाट सीधै ईण्डिया पढ्न जानेहरु कम छैनन् ।
अष्ट्रेलिया र अमेरिका पढ्न जानेहरु भने काठमाडौंबाटै परमर्श लिएर जान सहज मान्छन् । जापान पढ्न जानेको संख्या पनि उच्च छ । मेडिकलका लागि बंगलादेश, चीन फिलिपिन्स जानेहरु छन् भने पाइलटिङ कोर्सका लागि साउथ अफि्रका जाने ट्रेण्ड बढी छ ।
यसरी सब्जेक्ट स्पेशफिक भएर नै विदेश पढ्न जाने ट्रेण्ड छ । युरोपका बेलायत, जर्मनी लगायतका देशमा जाने पनि धेरै छन् ।
तपाईंहरु कार्यालयमा नियमित परामर्श चलिहरेकै हुन्छ, किन यस्तो मेला वर्षै साल गर्नुपर्‍यो ?
हामीअहिले इक्यान मेलको ११ औं संस्करणमा छौं । मेला आयोजना गर्नुकोमूलय उद्देश्य भनेको एउटै छानामुनी फरक-फरक कन्सटेन्सीको सेवा दिने भन्ने नै हो । हामीसाग आवद्ध ३ सय भन्दा बढी परामर्शदातृ संस्थाहरु आज एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ ।
यहाँ परामर्श लिनेहरुलाई प्रशस्त विकल्प छ । एक ठाउँमा काउन्सिलिङ गरेपछि तत्कालै अर्को संस्थाको परामर्ह लिएर इन्फरमेशन क्रस गर्न पाइन्छ । यसले समयले बचत भयो । विद्यार्थीले सही सूचना पाउने माध्यम नै यो मेला बन्यो । यो ठूलो अवसरका रुपमा अभिभाव र विद्यार्थीले लिन सक्ने भए ।
हामीले १९ वर्ष पार गर्दै गर्दा र ११ औं संस्करणको मेला आयोजना गर्दै गर्दा हामीलाई कुम्भ मेलाका रुपमा परिणत गरिरहेका पनि छौं । हामी कन्ट्री स्पेशफिक भएर विभिन्न फेयरहरु पनि वर्षैसाल गरिरहेका हुन्छौं । यसले विदेश पढ्न जान चाहानेलाई निकै सहयोग पुगेको विश्वास हामीलाई छ ।
यो वर्षको मेलाबाट केही फरक अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
पक्कैपनि मेलामा परामर्श लिन आउनेको संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गइरहेकै छ । विद्यार्थी अभिभावक, कन्सलटेन्सी र विदेशी कलेज र युनिभर्सिटीहरुको पनि सहभागिता बढ्दो छ । अर्को कुरा, पहिलो मेला इक्यान आफैंले ब्यवस्थापन गरेको थियो ।
त्यसपछि हामीले १० औं सम्म ब्यवस्थापन एजेन्सीलाई दिने गरेका थियौं । तर, यो वर्ष फेरि हामी आफैंले मेलाको ब्यवस्थापन हेरेका छौं । यहाँभित्र सीएसआर अन्तरगत ब्लड डोनेशनका कार्यक्रम पनि राखेका छौं ।
त्यसैले परामर्शमार्फत विदेश जान चाहानेलाई सुसूचित गर्नेसँगै मेलालाई हामीले विभिन्न पटामार्फत बलियो बनाएका छौं ।
शैक्षिक परामर्श लिन विद्यार्थी मात्रै आउने र अभिभावकको उपस्थित नहुँदा निर्णयका बेलामा अप्ठेरो आउने अवस्था पहिलदेखि नै छ । पछिल्लो समयमा अभिभावकले कतिको चासो चिन्ता बढाएका छन् ?
हो, हामी पनि विद्यार्थी मात्रै परामर्शका नआओस् भन्ने चाहन्छौं । किनभने विदेशमा पढ्न जानेकुरा विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टमात्रै होइन, अभिभावकको ठूलो लगानी पनि यसमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ किन हुँदैन भन्ने जान्न हामी उत्सुक नै हुन्छौं। त्यो जरुरीपनि छ ।
तर, अभिभावक पनि आएर आफ्ना सन्तानको वैदेशिक अध्ययनको इच्छाबारे चासो चिन्ता राख्नेको संख्या निकै न्युन छ । हामी त अभिभावकलाई अनुरोध गर्छौं कि छोराछोरीसँगै परामर्शमा आउनुस् र सबै विषयमा प्रष्ट भएर सन्तानलाई पढ्न पठाउनुस् । त्यो निकै जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकलार्इ मेलाकाे भरपुर सदुपयोग गर्न हामी अपील गर्न चाहान्छाैं ।- अनलाइनखबर
7/21/2017 03:23:00 PM